Mativi rectangular Pyramid vhoriyamu karukureta
Mativi rectangular Pyramid vhoriyamu karukureta Akakubvumidza kuti kuwana bhuku rakasiyana-siyana mapiramidhi, akadai mativi, rectangular uye chero mamwe marudzi mapiramidhi, kubudikidza Masvomhu siyana.
Mhando chepiramidhi nokuda vhoriyamu kukarukureta
By bhesi nharaunda Nokuti nguva dzose polygonal piramidhi Nokuti nguva dzose mativi piramidhi Nokuti nguva dzose rectangular piramidhi Nokuti tetrahedron
Urefu: Base nzvimbo:
Urefu: Base divi: Nhamba hwaro mativi:
Urefu: Base divi:
Piramidhi ndiwo polyhedron yavapo unobatanidza munhu polygonal pechingoro uye pfungwa, yainzi chakaderedzwa mutengo. Nechimwe unopinza uye chakaderedzwa mutengo chimiro netriangle, vakadana lateral chiso. Zviri conic hwakasimba polygonal chawo. —
h - Nokukwirira chepiramidhi
S - Bhesi nharaunda
Regular piramidhi chichibuda Pyramid ane pechingoro chichibuda polygon.
a - Bhesi divi
n - Nhamba kumativi pangoro
Regular mativi piramidhi ndiko chepiramidhi ane kodzero-angled, triangle panguva chawo extruding kusvika chete pfungwa.
Dzose rectangular piramidhi ndiko chepiramidhi ane mativi chawo uye anotarisana vakaenzana isosceles zvokuridza.
Tetrahedron ari polyhedron rinoumbwa mativi zviso zvina, nhanhatu pakarepo micheto, uye mana vertex pamakona.
a - Nomuromo tetrahedron